Iimpawu zegypsy lady | Ukuzoba
Iitopu zabafazi abangamaGypsy, uyilo olubhengezwe kakhulu kwisitayile esidala sesikolo
UFernando Prada | | Iimpawu zomntu
Yinto esele ivakalisiwe ngaphezulu kwesihlandlo esinye, isitayile ngasinye se tattoo sinxulumana nabo kuthotho lweempawu kunye / okanye izinto, ekuhambeni kweminyaka, ziye zapeyintwa kumatyeli amaninzi, zinxulunyaniswa ngokukhawuleza ezahlukeneyo Izitayile zetattoos esinokuzifumana namhlanje. Kwindaba ye Iitattoo zesikolo esidala, Las abafazi abangamaGypsy, ekwabizwa ngesiNgesi njenge Amantombazana angamaGypsy, ngomnye wabo.
Los Iimpawu zegypsy zabafazi Zithandwa kakhulu phakathi kwabathandi beetattoo zesikolo esidala ngenxa yeempawu zazo. Imilo, iimpahla kunye nezinto ezenziwayo zenza ukuba ezi tatto zibonakale ngokulula ngamehlo. Ezi tatto zihlala zisibonisa abafazi be-gypsy benxibe iinkcukacha ezahlukeneyo kunye nezinto zokuhombisa ezinje ngamakhonkco ependenti, amacici, ii-chokers, izikhafu okanye izikethi ezinde.
1 Intsingiselo yeetattoos kubafazi besigypsy
2 Iifoto zeGypsy Women Tattoos
Intsingiselo yeetattoos kubafazi besigypsy
El Intsingiselo yokuqala esinokuthi silunike kolu hlobo lweetattoo yile ukuzimela nokuzimela. Abantu abafumana i-gypsy tattoo bahlala bengabantu abazimeleyo kwaye akukho mfuneko yokuba baphile naye nabani na ukuze bazive bephelele, banenkululeko enkulu yomzimba nengqondo.
El Intsingiselo yesibini yile ye umhambi. IiGypsies ngokwembali beziluluntu oluhambahambayo. Ngonaphakade ukuhamba ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye ukukhangela indlela yokufumana imali kwizixeko ezahlukeneyo kunye namazwe ehlabathi. Abantu abanolu luyilo bahlala bekho abantu uphumle othanda ukuhamba kunye nokuzonwabisa ukuya kwinto engaziwayo nokuba kukodwa okanye kukhatshwa.
Un Intsingiselo yesithathu Iitoto zegypsy yi ubufazi kunye nomnqweno. Ezi zoyilo zihlala zenziwa kunye nomntu obhinqileyo jet iinwele ezimnyama kunye ithoni ebomvu kwizidlele emele inkanuko kunye nobufazi babafazi ngokubanzi. Zihlala zipeyintwe nge- ithoni yomlomo obomvu ukuqaqambisa umnqweno ukuba zimele. Abantu abenza ii-gypsies ze-tattoo ngale ndlela bahlala njalo abantu abatshisayo, ndinomdla kwaye kuye ngubani inkanuko kunye nomnqweno idlala indima ebalulekileyo kulwalamano lwakho lobuqu.
Ezinye iintsingiselo exhaphake kakhulu kolu hlobo lweetattoo zi ngelixa elizayo, ukuvumisa, amathamsanqa, uthando okanye indlela eya engaziwayo… Zonke zinxulunyaniswe nobomi besigypsy kunye nenkcubeko njengoko sazi njalo ngamabali abo kunye neentsomi zabo. Inxalenye enkulu yeetattoos yabasetyhini be-gypsy yenziwe ngale iphethe i yikristale ibhola, ayisebenzisayo ukwenza uqikelelo ngekamva lomntu ambuzayo. Banokubhalwa kunye ne tattoo amakhadi e-tarot okanye imvelaphi yeenkwenkwezi, Zonke zisetyenziselwe ubugcisa bokuvumisa.
Njengoko ubona, ii-gypsy tattoos zihlala zikhulu kakhulu ngenxa ye inani leenkcukacha ukuba baphathe kuyilo lwabo. Olu hlobo lokuzoba luhlala lubhalwe kumvambo umqolo, i-quads, okanye imilenze ngokubanzi iingalo neengalo okanye kwi ngasemva kwezandla...ngakumbi okanye ngaphantsi kweendawo ezinkulu apho igcisa lingenza umsebenzi mhle ngenene kwaye uneenkcukacha zonke. Kuyaziwa kakuhle ngabo bonke ukuba itattoo, ngokuhamba kwexesha, ihlala ilahla iinkcukacha kwaye ukuba incinci kakhulu ekugqibeleni ibonakala ngathi ibala eluswini. Oku kuyakwenzeka kwakhona kwezi zoyilo; ngokuba ngeenkcukacha ezininzi, ekuhambeni kweminyaka, baya kuphelela ekulahlekeni kwaye oko kutsalwe eluswini bekungayi kwamkelwa.
Ngenxa yolu phawu, ezi tatto zihlala zihlala zinxitywa ngamadoda kuba ingabo bahlala bekhetha iziqwenga ezinkulu okanye ezikhulu. Ngokwesiqhelo, abafazi bathanda ukukhetha iziqwenga ezingaphezulu kulungile kwaye incinci nangona kusoloko kukho izinto ezingafaniyo eziyinyani yomsebenzi wobugcisa.
Ukuba ungumntu othanda oku inkcubeko ibaluleke kakhulu kwaye izityebiNgaphandle kwamathandabuzo, indlela ebalaseleyo yokuhlala uphatha isiqwenga sakhe kunye nathi kukubamba enye yezi tatto kulusu lwakho. Ukuba wenza uphando kumnatha, uyakuyibona loo nto Uninzi lweeTatoo zabafazi abangamaGypsy zihlala zilandela iipateni ezifanayo. Umzobo kwiprofayili enezidlele ezibomvu kunye neenwele ezimnyama. Nangona sinokufumana iintlobo ezahlukeneyo zolu hlobo lweetatoo kwi-intanethi.
Nokuba une yikristale ibhola, intloko, kunye neentsiba okanye ngamakhadi athile e-tarot, Iitattoos zabasetyhini baseGypsy zihlala zilukhetho olufanelekileyo kubathandi be isitayela isikolo esidala.
Nangona kunjalo, Mna ngokobuqu ndingakhetha ukunika itattoo uthinte lomntu nokuba kungokuncoma okanye ngokudibanisa nezinye izinto ezinjenge rose, ukakayi okanye nasiphi na isilwanyana esinentsingiselo yobuqu kuthi. Ngokubhekisele kwindawo emzimbeni apho ezi tatto zingakhangeleka zilungile, njengoko besesitshilo ngaphambili, iindawo ezinkulu apho iinkcukacha zinokuthathelwa ingqalelo zikhethwa kodwa, ngokubanzi, ziyilo ezilungelelanisa ngokugqibeleleyo phantse naliphi na ilungu lomzimba apho ndenze isigqibo sokwenza i-tattoo.
Njengesiqhelo, sikushiya ukhetho oluncinci lweefoto zabasetyhini be-gypsy apho unokufumana khona izimvo zokuqeshwa kwakho okulandelayo nge-inki kunye nenaliti.
Iifoto zeGypsy Women Tattoos
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zomntu » Iitopu zabafazi abangamaGypsy, uyilo olubhengezwe kakhulu kwisitayile esidala sesikolo
Iitattoos zeeroses kunye neentsimbi: ingqokelela yoyilo